March 5, 2021 Xuseen 5
Puntlandtimes (Muqdisho)-Ra’iisul wasaaraha Xil gaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay sababtii keentay in uu fashilmo shirkii kala dhaxeeyay Midowga Musharaxiinta ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday Magaalada Muqdisho.
Kuwani dadka wax uma soo wadaane waa in laga tashadaa, yaase ka tashan dadka iyo dalkuba waa la haystee.
Nasiibdarro, murashixiintu amase reer Muqdisho arrinku maalinkii uu xalka lahaa ayeysan ku baraarugin oo wax ka qaban. Reer Muqdisho waxaa talada laga marooqsaday markii Farmaajo geystay saddex qawsaar Xamar, Hirshabelle, iyo Galmudug. Waxaa soo raaca Rooble oo ah middi saawir ah. Waa qawsaarro ka fakera jeebkooda iyo dantooda shakhsi keliya. farmaajo dadka wuxuu u tusaa in afartaas qawsaar matalaan beesha Hawiye isla markaana murashixiintu yihiin shakhsiyaad aan cidna matalin.
Midowga Murashixiintu haddii ay haystaan taageerada shacabweynaha Hawiye waa inay xoogga saaran sidii qawsaarradaas meesha uga bixi lahaayeen amase u qaadan lahaayeen mowqif ka tarjumaya doonitaanka shacabka Hawiye. Waxayse u egtahay in xeero iyo fandhaal kala dhaceen.
Sida shacabka Muqdisho ugu soo baxaan mudaharaadka Sabtida ayaa muujin doonta Midowga Murashixiinta amase qawsaarrada — labadaa kan haysta taageerada shacabka.
3 qodob ayaan kahadli
Farmajo waxaan dhihi
Lahaa u. Sheeg in tuugtan
Aay dalka xasiloni xumo
Larabaan waad shaqaysay
Somalia dadka way kuraban
Laakiin hadalkii ayaa
Kaxiran sanadkii atlest 5
Mar lahadal shacabka usheeg
Wixii jiro kolay waan og
Nahay inaad dacad aad tahay
2 xasan iyo shariif lafihiina
Hakuqamaarina xasanow askartii aad shalay lahayed
Ninkii aan 100$ dolar rabin
Haiskatago ayaa ka soo
Horeeyo walaahi hadii amar
Lasiiyo in adan mahadin
Doonin ficilkooda waliba
Ciidanka waa abgaal dhulka
3 shacabka waxaan layahay
Dowlada karabsiiyay oo
Cayayanka dhibaayo ladirira
Aniga oo ah MADAXWEYNAHA kalidii is magacaabay ee mandaqadda Sool, Sanaag & Buuhoodle, waxa aan bogaadinayaa dedaalada uu wado ra’iisal wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya, ee teedsan min LAWYACADDO illaa Liboye-Somaaliya; ra’iisal wasaare waad MAHADSANTAHAY.
Marka ay halkaa giraantu botorinaydo, waxa ay shacabka Soomaaliyeed (ee teedsan min LAWYACADDO illaa Liboye) u hanqal taagayaan in QALINKA LAGU DUUGO soojeedimihii guddiyadii farsamada ee heshiiskii 17 September. Shacabka Soomaaliyeed marnaba ma aqbalayaan in masiirkooda ay kolba koox cusub, oo magacyo la baxday, ay ISBAARO u dhigato oo XAGAL DAACISO.
Dhinaca kale, heshiiskii gebagebada marayey dib halloo furo si danteenna gaarka ah ay uga dhex muuqato, waxa aannu u aragnaa isku day lagu minjaxaabinayo qorshayaashii uu ra’iisal wasaaruhu ka hor sheegay baarlamaanka hortiisa. In heshiiskaas dib loo furo waxa ay noqonayDaa in dib haddana baarlamaanka loogu celiyo, taasina kuma jirto DANTA QARANKA. Sidaa daraadeed, waa in madaxda qaranku qaadataa go’aan geesinimo leh oo lagu bedbaadinayo qaranka Soomaaliyeed, iyada oo lala tashanayo C6+, oo dhaqaale badan ku bixisa waddanka.
Aniga oo, haddaba, fursaddan ka faa’iidaysanaya waxa aniga iyo maamulkayguba CANBAARAYNAYAAN weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday xabsiga weyn ee degmada Boosaaso. Waxa aan ujeedin lahaa in culimada, aqoonyahanka, dhalinyarada, isimada & hooyooyinka gobolka Bari, gaar ahaan degmada Boosaaso, ay tashadaan; wax maamul ah oo danahooga ugu maqani ma muuqdo. Waa in ay ku talagalaan in ay uyaku doortaan golahooda deegaanka, duqa magaalada & kan gobolkaba. Waa in aysan dib u aqbalin in maamul koox gaar ah u adeegaya lagaga keeno dusha.
Sidaas si le’eg, waxa aan fariin taas la mid ah u dirayaa waxgaradka degmada Gaalkacyo guud ahaan, gaar ahaan qaybta Puntland. Waar maamul danihiina si toos ah xil isaga saara meesha iigama muuqdo ee tashada oo maamulkiinna doorta. Kooxda AARANJAAN waxa ay ku mashquulsanyihiin hantida dadweynaha oo ay lunsadaan si ay danahooda gaarka ah ugu fushadaan; HURDADA HAKA TOOSINA IYADA OO AY WAKHTI DANBE TAHAY.
Gunaanadkii, mar labaad ra’iisal wasaaraha qaranku waa ku mahadsanyahay isku dayadiisa uu waddanka xal ugu raadinayo waana in si DEGDEG ah loo dhammaystiraa soojeedimihii guddiyadii farsamada ee heshiiskii 17 September, si waddanku uu doorasho u aado horayna ugu socdo.
Intaa waxaa dheer, waa in feejignaan iyo taxaddar dheeri ah loo yeeshaa waxa bannaanbaxa loogu yeeray ee ay MALEEGAYAAN Garoowe & nimanka aad xalay la kulantay. Waddankan waa lagu soo duulay waa in tallaabada la qaadayo laga taxaddaraa.
@@@ Mohamed Ali
Waano — abuuris baa ka horreysay. Nin Alle ku abuuray afgaroocnimo, muxuu ku hadlaa. Tan kale, waxaad tiri sannadkii 5 jeer hadal — labo bilood iyo bar mar hadal! Madaxweynaha Maraykanka asbuucii mar ayuu dadkiisa u jeediyaa khudbada la yiraahdo State Of The Union.
Afartii sano ee uu xilka hayey Farmaajo hal hadal oo lagu xusuusto ma jeedin. Bal calaamada la arkay nin xukun iyo kursi-jecayl lagu ibtileeyey oo haddana aan dadka la hadli karin; si furan aan weriye su’aal u weyddiin karin; baarlamaanka intuu warqad qoran ka akhriyo cararaya!
Sidee ku rumaysanaynaa in dalka isagu ka talin jirey ee aan maafiya qarsoon majaraha u hayn dalkan? Ninka xilligii xasaasiga ahaa ee xilkiisu sii dhammaanayey awoodiwaayey inuu dadka la hadlo ma rajo kale ayaa laga sugayaa?
Waxba illinta yaxaaska ha u qubin. Wax naxariis iyo caadifad ah uma haysid reer Puntland. Reer Bari iyo reer Gaalkacyo talada aad siinayso waxaa kaaga baahan halka aad kasoo jeeddo.
Tan kale, haddii aad rumaysan tahay in Rooble yahay ‘ra’iisalwasaaraha min Lowyocaddo ilaa Raas Kiyaambooni’ maxaad marna uga hadliweyday qaddiyadda Somaliland?
Waxba Dhulbahante ha isku sidkin. Dhulbahante kooda ugu neceb Puntland, waa la yaqaan waxa uu ku hadlo amase halka colaaddiisu gaarsiisan tahay; adiga colaaddaadu waa mid aad uurka hooyadaa kala soo baxday oo DNA kaaga jirta. Layaab malihid.
Matalan, HANUUNIYE oo in badan reer Puntland caaya, haddana, waa la fahmi karaa inuusan colaad hurguntay u qabin Puntland iyo Majeerteen sida aniguba aanan ugu qabin colaad Reer Diini. Waa wax caadi ah in labo isku hooyo ah xitaa ku murmaan dhaxalka aabbahood. Marka, adiga iyo kuwa midka ah ee ciil-kama-baxeyaasha ah موتوا بغيظكم